China Discount Remote Control Touch Wall Switch In Stock ရှိပါပြီ။
1. ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် Remote Control Touch Wall Switch
2. အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ကန့်သတ်ချက်များ နံရံခလုတ်ကို ထိပါ။
မက်။ ပါဝါ: 600W/ဂန်း
အဝေးထိန်းခလုတ် ထိတွေ့နံရံခလုတ်ကို အသုံးမပြုမီ အောက်ပါအရာများကို စစ်ဆေးပါ။
hot Tags:: အဝေးထိန်းခလုတ် Touch Wall Switch၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာတွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်